Loan okungabizi futhi ezithakazelisayo kusuka Sberbank nezezindlu
Njengoba kusukela ngelanga imalimboleko Sberbank nezezindlu - enye yezindlela ezithakazelisayo kakhulu ukuthola izindlu zangasese. Into ebaluleke kakhulu ngoba lo muntu obolekayo wukuthi ibhange wathi kuye nesineke futhi ngomqondo ovulekile aphathe amakhasimende ezingase zizibangele. Lokhu kukodwa angeke kodwa jabulani. Okwamanje, kunezinhlobo 7 izinhlelo ukuhlinzeka ukubolekisa, 3 wabo - base futhi 4 - ekhethekile.
Okwenza kube kungenzeka ukuthola imalimboleko Sberbank izindlu? Uhlu lokukhethwa kukho, kufanele kuphawulwe, kuyinto ehluke umxhwele. Izakhamizi usebenzisa umbolekisi imali, banelungelo noma ukuthenga impahla zakho ozithandayo (esisha noma ngaphansi ukwakhiwa), noma bebodwa ukuze yakhe lesi sakhiwo. Esimeni sesibili kungenzeka, isibonelo, ukwakhiwa kwezindawo zokuhlala, kanye emagalaji.
Ngaphansi kwamiphi imibandela anikezwe abatshelekayo e Sberbank eRussia? Kuyacaca ukuthi zonke izinhlelo eziyisikhombisa ekhona kwezinye imininingwane zihlukile komunye nomunye. Ngezansi uzobe zindlela lapho kufaneleke akunakubangelwa ezivamile (eziyisisekelo) enikeziwe:
• isikhathi esiphezulu okuyiwona credit kungenziwa ikhishwe - iminyaka engu-30;
• inani eliphansi - kuncike lwemali in ruble - 45 million (noma okulingana ngamadola wase-US noma euro). Njengoba ukwakhiwa izindlu edolobheni, kuningi ngemali encane ngaphezulu. Kuyinto ruble ayizigidi 300, noma okulingana e currency angaphandle;
• inani eliphezulu - akuyona ukusebenza kwezikole zokusoka. Nokho, usayizi waso alikwazi ukuba ngaphezu kuka-85% ukubaluleka kwento (okokugcina kungaba inkontileka noma elilinganisiwe Kunoma yikuphi, ezincane kuyakhethwa.);
• isibambiso - ukuthola impahla noma omunye ukuthi selivele likhona impahla umboleki sika. Nokho, ukutusa Savings Bank ingakhishwa izindlu kanye nezinye izinhlobo ze-software.
Kulandele inkulumo mayelana zenzalo. Mshini kumiswa yabo akuyona elula. Inani elithile ngokuba uthi amaphesenti credit ikhishwa izindlu Savings Bank ngaphansi kwazo, has a eziningi. Chief phakathi kwabo - usayizi ukukhokhelwa phansi. Kukhona inversely kwencika ezilinganiselwe: ayanda njengoba linjalo, njengeliyiZwi ephansi izinga. Kubalulekile futhi futhi yinkathi umboleki uhlose ubuyisele inkokhelo athathwe. Ukushesha enza kanjalo, iholo elincane. Ekugcineni, beka iklayenti isethelwe umsebenzi: zamaqembu kwezinye izinhlangano ube ekhethekile yohlelo lokwethembeka.
Uma ufuna ukuthola imali ngaphandle kwenzalo ukuze Sberbank eRussia, kufanele uhlangabezane nezimfuneko ezithile. Okokuqala, kudingeka okungenani ube neminyaka engu-21 ubudala, kodwa hhayi emidala kuno-75 edlule, osukwini lapho ungakwazi ngenjabulo athi: "Ngizokhuluma ukweletwa lutho ubani" Okwesibili, umklamo imalimboleko yohlobo echazwe itholakala kuphela izakhamuzi Russia. Qinisekisa leli qiniso kungenzeka esebenzisa i-passport yakhe. Ezinye izindaba zika-zimfuneko sasivumela bendabuko. Thola okungenani ubude obufanayo yesevisi. Noma umlando omuhle credit. Futhi akusiyo kuphela mayelana nohlobo elala isikhungo yasebhange, kodwa futhi nabo bonke abanye. Nakani leli phuzu, njengoba ukubandakanywa kuthengiselana guarantors ezihlongozwayo. Ngaphezu kwalokho, uma oshade naye kumele abe co-umboleki we Isihloko.
Indlela ukuhlela mortgage?
Okudingayo bengatshelekwa ku ifulethi? Yini imibhalo edingekayo?
Kufanele ngikhipha a mortgage: izeluleko kongoti
Kungaphansi kwaziphi izimo ukunikeza abatshelekayo: imibhalo, izici kanye nezincomo
Kanjani ukubala mortgage: Amathiphu abazothenga
Ngingalutholaphi wenze mortgage refinance?
Igcine Nkulunkulu: ungubani? Yini igama unkulunkulu umoya?
Strip LED ekhishini. Kwasemuva LED kuphundla ekhishini
Reducer Vaz-2107: ezibekiweko lobuchwepheshe
The Mask ubumba abamnyama ngokuba ubuso: zokupheka, izici isicelo, ukusebenza kanye nokubuyekeza
Izitshalo Outdoor: igama, incazelo, ukutshalwa
Ukwelashwa nokuvikelwa Helicobacter pylori. Amashingili: izimpawu, ukwelashwa
Uyini kokulutheka lwamaGypsy?